Various - Izaho dia avy amin'ny Mac | Avy amin'ny Mac aho (Pejy 3)
Raha tianao ny rap dia tsy azonao atao ny mandiso ity horonantsary Apple Music ity
Apple nanampy horonan-tsary vaovao tao amin'ny fantsona YouTube Apple Music mitondra ny lohateny hoe: Rap Life Live: Howard University
Ny manaikitra eo anelanelan'ny Cook sy Draymond Green noho ny fanidiana ny peratra Apple Watch
Ny mpilalao NBA Draymond Green dia nanohitra an'i Tim Cook hanao fifaninanana hijerena izay manidy ny peratra voalohany amin'ny Apple Watch
Ny 23 septambra dia hisokatra amin'ny fomba ofisialy any India ny fivarotana an-tserasera
Ny fivarotana an-tserasera Apple any India dia hiasa amin'ny 23 septambra satria nanamafy tamin'ny fomba ofisialy izy ireo androany avy amin'ny Apple
Podcast 12 × 01: Famakafakana hetsika Apple
Ny podcast voalohany amin'ny vanim-potoana 12 dia efa vita ary nanomboka tamin'ny fomba tsara indrindra izahay, miaraka amin'ny teny fototra an'ny Apple Watch sy ny iPad Air
Apple dia manolotra ny Apple Watch Series 6 sy Apple Watch SE
Ary manohy manome hevitra momba ny vaovao entinay ity keynote Apple virtoaly ity. Ankehitriny dia anjaran'ny ...
Apetraho ao amin'ny Mac ny sary-fitenenana ny hetsika rahampitso
Jereo ny fiomanana amin'ny hetsika rahampitso miaraka amin'ireto sary miavaka ireto ho an'ny efijery Mac anao
Ity tontolo ity ho an'ny Mac Pro dia toa noforonin'i Apple
Raha mividy an'ity solosaina ity ianao dia manana adidy hitady ny tontolo iainana ho an'ny Mac Pro tonga lafatra toa ny nataon'i Jonathan Morrison
Apple dia hanana ny sarontava azy manokana. Saingy tsy hamidy azy ireo izany, farafaharatsiny mba eritreretiko.
Manontany tena aho hatramin'ny volana martsa, rahoviana i Apple no handefa ny sarontava azy? Toa tonga ny fotoana, na tsia.
Tsy afaka miditra amin'ny Apple amin'ny Epic amin'ny 11 septambra ianao
Ny ady eo amin'ny Epic Games sy Apple dia mitohy ary mihabe. Raha fintinina dia afaka milaza isika fa izao dia fitohizan ...
Podcast 11 × 49: Manana hetsika isika amin'ny 15 septambra
Tao amin'ny podcast Apple dia niresaka momba ny ady nifanaovan'i Mark Gurman, Jon Prosser ary L0vetodream izay nifidy ny lafiny Gurman sy L0vetodream izahay.
Apple Marina Bay, Apple Store voalohany amin'ny rano, hisokatra rahampitso any Singapore
Rahampitso 10 septambra, hisokatra ao Singapore ny varavaran'ny Apple Store voalohany mitsingevana, amin'ny alàlan'ny fanendrena ihany.
Ny Airtags dia novokarina betsaka, vonona amin'ny 15 septambra.
Voamarina fa ny Airtags dia efa novokarina betsaka ary noho izany dia tsy azo atao ny manolotra azy ireo miaraka amin'ny iPhone 12
EyeDrive no rafitra ampiasain'i Apple hamoronana sarintany manokana
Navoaka androany ny angon-drakitra teknika momba ny fiasan'ny rafitra EyeDrive an'ny Apple. Ireo no fiara efa nahazatra ...
Apple dia te hanao ny solomaso misy azy
Apple dia mifantoka tanteraka amin'ny zava-misy mitombo, tsy misy isalasalana. Hitantsika tamin'ny vaovao maro mifandraika amin'izany ...
Apple Maps dia manisy fiasa vaovao ho an'i Portugal sy Netherlands
Ny Apple Maps dia nohavaozina amin'ny alàlan'ny fanampiana toerana 3D vaovao sy ny mety hampiasana fitateram-bahoaka any Portugal sy Netherlands.
Podcast 11 × 48: Mizara izany ny septambra sy oktobra
Fizarana vaovao amin'ny podcastapple izay hizarantsika aminao ny hevi-dehibe amin'ny herinandro eto amin'ny tontolon'ny Mac
Apple dia hanavao ny Apple Store angano any Soho any New York
Ny New York's Soho Apple Store dia nanomboka fanavaozana izay hanala ny teatra malaza.
AirPods Pro dia hifanaraka amin'ny AirPods 2 amin'ny fandefasana azy, amin'ny faran'ity taona ity
Raha ny filazan'ny mpandalina, ny fandefasana AirPods Pro dia hifanandrify amin'ny an'ny AirPod amin'ny faran'ity taona 2020 ity.
Ny MacBook amin'ny ho avy dia mety ahitana hinge izay ahazoana aina kokoa ny fanoratana azy
Apple dia nanisy patanty iray izay manome ny fahafaha-mampiasa hantsana izay mahatonga ny MacBook ho ergonomic bebe kokoa ho an'ny mpampiasa azy
Netflix dia manana atiny maimaimpoana voafetra ho an'ny macOS
Manana fotoana hijerena ny atiny Netflix ianao, voafetra maimaim-poana amin'ny fitaovanao amin'ny macOS tsy misy fisoratana anarana mialoha
Ity iMac ity no kely indrindra eto amin'izao tontolo izao. Manana hafetsena
Raha te hahazo iMac kely indrindra eran'izao tontolo izao ianao alohan'ny hahafantaranao fa manana hafetsena izy. Mahagaga ny valiny farany
Ity tanany Ekster ity no ilainao amin'ny MacBook anao
Ny laptop Ekster na tanany vita amin'ny takelaka dia mamela anao hitondra izay rehetra ilainao ary manao izany koa miaraka am-pianarana.
Ireo mpandresy amin'ny fanamby Apple Watch dia mahazo ny lokany
Apple dia manomboka mamoaka ireo izay nahatratra ny fanambin'ny hetsika anatiny tao anatin'ny iray volana.
Apple TV series + Invasion manohy ny famokarana
Ny tantara mitohy, Invasion, dia miverina mihetsika ary manomboka maka sary ny fizarana vaovao indray amin'ny fepetra henjana
iMovie ho an'ny Mac dia mahazo kinova vaovao miaraka amin'ny vokatra Comic
Apple dia mandefa kinova vaovao an'ny mpamoaka horonantsary iMovie. Ao amin'ity kinova vaovao ity dia manampy fanatsarana sy sivana Comic
Azonao an-tsaina ve ny Mac Mini miaraka amin'ny iPod nano?
Tamin'ny taona 2005, rehefa natomboka ny Mac Mini sy iPod nano dia nisy olona tao amin'ny Apple nikasa ny hanambatra ireo fitaovana roa ireo. Tsy mandeha ny hevitra
Bill Gates dia nilaza fa ny orinasa toa an'i Apple dia tokony hohamarinina manokana
Tamin'ny resadresaka nifanaovana tamin'i Bill Gates dia nanambara izy fa ny orinasa toa an'i Apple dia tokony hampandoavina hetra bebe kokoa avy amin'ny governemanta
Sarintany vaovao azo tanterahina kokoa avy amin'ny Apple Maps ho an'ny UK sy Irlandy
Apple Maps dia nanomboka nampiditra sarintany feno antsipiriany momba an'i Angletera sy Irlandy na dia mbola tsy azon'ny mpampiasa rehetra aza izany
Apple mahazo 2 lavitrisa dolara, Apple Music maimaim-poana mandritra ny 6 volana sy mihoatra. Ny tsara indrindra amin'ny herinandro dia avy amin'ny Mac aho
Herinandro feno vaovao hikasika ny tananao amin'ny faran'ny volana aogositra izao. Izahay dia mizara aminareo ny sasany amin'ireo miavaka indrindra
Toa ny mitory an'i Apple no lamaody
Ny fiampangana Apple dia mahazatra. Izany no atrehin'ireo orinasa lehibe na dia tsy mitombina aza ny fangatahana indraindray.
Epic Games dia tsy ilay mahery fo andrasana amin'ny fikomiana amin'ny Apple
Ilay toa ny ady an-tsokosoko nataon'ny Epic Games manohitra ny lazaina ho ampihimamba an'i Apple, dia tao anaty varotra noho ny tsy fanitsiana ny kaomisiona.
Apple Watch no mpitarika ny varotra tsy azo iadian-kevitra amin'ity taona ity
Ny Apple Watch no mpitarika ny varotra tsy azo iadian-kevitra amin'ity taona ity. Mpitarika na amin'ny singa amidy na amin'ny turnover.
Apple dia nividy Camerai ary nanondro fa tena matotra amin'ny Augmented Reality
Tamin'ny taon-dasa dia nahazo ny Starter Up Camerai i Apple tamin'ny famolavolana ny haitao nampitomboina.
Apple Pay dia mahatratra banky maro any Eropa
Ireo orinasam-bola vaovao any Eropa sy Kanada dia manampy ny safidy fandoavam-bola amin'ny alàlan'ny serivisy Apple, Apple Pay
Ny zava-drehetra dia manondro fa ny mpampiasa Apple dia tsy maintsy manao veloma ny lalao Fortnite sy Epic
Raha mitohy any amin'ireto tari-dalana ireto ny ady eo amin'ny Epic Games sy ny Apple, dia azo inoana fa tsy maintsy hanao veloma ny olona milalao Fortnite isika
Ireo processeur an'ny Intel's Tiger Lake izay tsy misy Mac hiakatra
Intel dia manomana ny fandefasana ireo processeur vaovao an'ny Tiger Lake izay azo inoana fa tsy hipetraka intsony amin'ny maodelin'i Mac.
Malware vaovao ho an'ny Mac izay miparitaka amin'ny tetikasa Xcode
Ny mpikaroka dia nahita Malware vaovao zaraina amin'ny alàlan'ny tetikasa Xcode na dia mbola tsy tena mazava tsara aza ny fomba
Inona no hitranga amin'i Apple raha manaraka ny fitarihan'ny Epic Games ny rehetra?
Ahoana raha toa ka manaraka ny fitarihan'ny Epic Games ireo orinasa hafa? Azonao atao ny mieritreritra zavatra telo azo atao. Avy amin'ny tena tsy azo inoana ary tena azo inoana
Mbola mikatona i Puerto Venecia, Google Maps ho an'ny watchOS sy maro hafa. Ny tsara indrindra amin'ny herinandro dia avy amin'ny Mac aho
Herinandro lehibe amin'ny resaka vaovao avy amin'izao tontolo izao i Apple dia miahiahy, ary na eo aza ny volana Aogositra dia tsy mamokatra ny vaovao sy ny tsaho.
Apple dia afaka mamorona fitaovana fitsaboana ho an'ny marary mitaiza
Apple dia nanao patanty ny famoronana fitaovana fitsaboana azo alefa izay manara-maso ireo marary voan'ny aretina mitaiza
Mampitandrina i Apple: mety hihemotra ny fandraràna ny fampiharana sinoa
Tian'i Trump ny fanesorana ireo fangatahana sinoa ao amin'ny App Store sy ireo orinasa hafa hampitsaharana ny varotra miaraka amin'ity firenena ity. Toe-javatra sarotra.
Raiso maimaimpoana ny DearMob iPhone Manager, tantano amin'ny fomba tsotra ny iPhone-nao
Mitady safidy hafa amin'ny iTunes hitantanana ireo rakitra iPhone sy hanaovanao kopia voafafa? Jereo ny DearMob iPhone Manager.
Apple dia afaka misoroka ny vidiny apetraka amin'i Shina noho ny Foxconn
Foxconn dia nanambara fa mandinika ny fanitarana ny famokarana any ivelan'i Sina izy mba hialana amin'ny haba napetraka tany Etazonia.
AirPods dia afaka manitsy feo ho an'ny fiarovana ny mpampiasa bebe kokoa
Ny patanty apetrak'i Apple dia afaka manatsara ny fiarovana ny mpiserasera mitafy AirPod amin'ny alàlan'ny fanitsiana ho azy ny feo manodidina.
Ny vadin'i Wozniak dia manasa anao hanao fety virtoaly tsingerintaona faha-70 an'ny vadiny
Ny vadin'i Wozniak dia manasa anao hanao fety virtoaly tsingerintaona faha-70 an'ny vadiny. Amin'ny 2 ora maraina dia amin'ny 12 Aogositra, ora Espaniôla.
Ny Wall Street Journal dia mijery ny asan'i Tim Cook ao amin'ny Apple
Ny Wall Street Journal dia mijery ny asan'i Tim Cook ao amin'ny Apple. Izy io dia manazava ny fomba fisainan'i Cook, izay voamarika tsara tamin'ny fivoaran'ny Apple.
Veloma ny Office 365 2016, beta-panjakana an'ny Big Sur ary maro hafa. Ny tsara indrindra amin'ny herinandro dia avy amin'ny Mac aho
Herinandro iray hafa no hizaranay aminao ny hevitra misongadina rehetra amin'ny herinandro amin'ny hoe avy any Mac aho.
Greg Joswiak dia misolo an'i Phil Schiller ho filoha lefitra zokiolona ao amin'ny Apple
Apple dia miaina tsy amin'ny fanavaozana iMac fotsiny. Ny orinasa amerikana dia tsy nanambara fotsiny ny fanavaozana ao amin'ny faritry iMac ...
Boon dia hajanona amin'ny Apple Pay amin'ny volana oktobra
Boon dia hitsahatra tsy hanompo ny mpanjifa Apple Pay hatramin'ny 3 Oktobra 2020
Apple mankalaza ny fiverenan'ny NHL amin'ny horonantsary vaovao "Shot on iPhone"
Mankalaza ny fiverenan'ny NHL i Apple miaraka amin'ny horonan-tsary "Shot on iPhone" vaovao. Mampiseho sary voatifitra avy amin'ny iPhone Pro mifikitra amin'ny tsorakazo.
Ampahefatry ny vola, fitarihana taolana AirPods, sy maro hafa. Ny tsara indrindra amin'ny herinandro dia avy amin'ny Mac aho
Herinandro iray hafa dia zarainay aminao ireo hevitra misongadina rehetra amin'ny herinandro ao amin'ny Mac avy any Mac
Azonao atao ny manandrana Mac OS 8 amin'ny Mac misy anao amin'ny Mac OS Catalina
Ny mpamorona Felix Rieseberg dia nahatonga ny Mac Os 8 hiasa amin'ny Macintosh Quadra 900 1991 tsy misy emulator tafiditra ao
Fizarana vaovao an'ny Apple Podcast izay hiresahantsika momba ny famohana iPhones amin'ny Face ID sy ny sarontava
Ny mpitantana ny laharam-pahamehana "Tokony" ho an'ny macOS dia mahazo fanavaozana lehibe
Ny mpitantana ny laharam-pahamehana "Tokony" ho an'ny macOS dia mahazo fanavaozana lehibe. Fifanarahana vaovao sy fiasa vaovao hanatanterahana azy.
Hevitra iray hafa an'ny Apple Glass
Ny vera nitarina an'i Apple, Apple Glass, mety hanana na tsia ity famolavolana ity. Asehon'i Geskin izany
Mampahatsiahy antsika ny Apple Maps hanaja ny quarantine
Ny fampandrenesana dia mampatsiahy antsika hijanona ao an-trano mandritra ny 15 andro raha mandalo seranam-piaramanidina iray isika
Elisabeth Moss dia milalao ny andiany Shining Girls ho an'ny Apple TV +
Ilay mpilalao sarimihetsika The Handmaid's Tale dia mpilalao sarimihetsika The Shining Girls for Apple TV +, andiany novokarin'i Leonardo DiCaprio.
Feo ao amin'ny macOS Catalina vs. macOS Big Sur
Feo ao amin'ny macOS Catalina vs. macOS Big Sur. Mpampiasa iray dia namoaka horonan-tsary roa izay re ny feo ao amin'ny macOS roa.
Apple dia nanampy ny detection "EvilQuest" ho an'ny macOS Catalina
Apple dia nanampy ny detection "EvilQuest" ho an'ny macOS Catalina. Hamarino raha manana ny kinova farany 2126 an'ny Xprotect amin'ny Mac ianao.
Ilay mpilalao mozika James Blake sy mpaka sary Tyler Mitchell dia kintana amin'ny horonan-tsary vaovao ho an'ny "Behind the Mac"
Ilay mpiangaly mozika James Blake sy mpaka sary Tyler Mitchell no kintan'ny horonan-tsary "Behind the Mac" vaovao. Asehon'izy ireo ny fomba ampiasan'ireo zavakanto malaza eran-tany ny Macs ho toy ny fitaovam-pandraharahana.
Ny AirPods ho avy dia afaka manitsy ny feo mifototra amin'ny fihetsiketsehanao
Apple dia tokony hametraka ny zava-drehetra amin'ny fetra farany tsy ampoizina. Na dia amin'ny sofina an-tsofina toy ny AirPods aza, fitaovana iray ...
Apple dia mampiseho ny sasany amin'ireo emoji vaovao izay ho tonga amin'ity taona ity
Apple dia mampiseho ny sasany amin'ireo emoji vaovao ho avy amin'ity taona ity. Nasehony antsika ny 13 amin'ireo 117 izay hampidirina ao amin'ny fitaovana Apple amin'ity taona 2020 ity.
Ahoana ny fomba hidirana ao amin'ny "Programme Provider Independent Provider Program" an'i Apple
Eto ianao no manana ny fampahalalana rehetra momba ny fidirana amin'ny programa fanoloran-tena tsy miankina an'ny Apple.
Nanazava i Shyamalan fa tsy ho ela izy ireo dia hamita ny horonantsary faharoa amin'ny "Mpanompo"
Nanazava i Shyamalan fa mamita ny horonantsary amin'ny "Mpanompo" andiany faharoa izy ireo. Nanana «fijanonana» noho ny COVID-19 izy ireo saingy efa manohy ny fandefasana horonantsary indray.
Apple dia hametraka vola amin'ity 400 tapitrisa dolara ity amin'ny fandaharan'asan'ny trano mora vidy any California
Apple dia hamoaka vola $ 400 tapitrisa amin'ity taona ity amin'ny fandaharan'asan'ny trano mora vidy any California. Izy io dia hanampy ireo California tsy manan-katao an-jatony.
Ny sandan'ny Apple dia hitentina roa tapitrisa tapitrisa amin'ny 2021
Ny sandan'ny Apple dia hahatratra roa arivo tapitrisa dolara amin'ny 2021. Misaotra ny iPhone 5G sy Apple Silicon ny orinasa dia hampitombo ny sandany.
Ny première "Greyhound" ao amin'ny Apple TV + amin'ny teny anglisy ihany
Ny première "Greyhound" ao amin'ny Apple TV + amin'ny teny anglisy ihany. Noho ny areti-mandringana, tara ny studio studio dubbing. Tsy maintsy miandry isika.
Lahatsary vaovao ho an'ny "Behind the Mac" an'i Apple dia mampiseho an'i James Blake miasa an-trano
Lahatsary vaovao ho an'ny "Behind the Mac" an'i Apple dia mampiseho an'i James Blake miasa an-trano. Hafatra ho an'ireo miasa ao an-trano noho ny COVID-19.
Podcast 11 × 43: Fampandrosoana Apps ho an'ny iOS 14
Podcastapple fanontana vaovao izay hiresahantsika ny fampandrosoana ny fampiharana amin'ny mpamorona. Mikasika lohahevitra Apple mahaliana hafa koa izahay
Apple dia manana patanty ho an'ny fitendry keyboard
Apple dia mangataka patanty ho an'ny fitendry fitaratra. Mety hanana jiro backlight tsara io ary tsy hamafana ny taratasy raha ampiasaina.
Misokatra anio ny fisoratana anarana amin'ny "Made in LDN" an'i Apple
Androany dia misokatra ny fisoratana anarana amin'ny "Made in LDN" an'i Apple. Dimy herinandro izay hianaran'ny famoronana tanora ny asany amin'ny tontolon'ny mozika.
Izay lazain'ny LED amin'ny AirPods anao
Inona no ambaran'ny LED an'ny AirPods anao. Manana loko telo samy hafa izy hanehoana anao ny fanjakana samihafa amin'ny AirPods sy AirPods Pro.
Fivarotana 30 eo ho eo indray no hikatona noho ny virus coronavirus
Apple dia hanidy fivarotana 30 hafa any Etazonia noho ny olana ateraky ny areti-mifindra coronavirus ao amin'ny faritany
Podcast 11 × 41: Famakafakana WWDC 2020
Ity ilay podcast izay noraketinay ny alin'ny WWDC 2020 lahateny miaraka amin'ireo mpiara-miasa aminay amin'ny Actualidad iPhone. Tsy afaka mamoy an'ity ianao
Tim Cook sy ny fiarovana ny zom-pirenena manohitra an'i Trump
Tim Cook dia miresaka amin'ny resadresaka ho an'ny CBS, tsy momba ny WWDC ho avy, fa ny maha-zava-dehibe ny fiarovana ny zon'olom-pirenena
Disney + tsy manolotra volana fitsarana maimaimpoana intsony
Ny serivisy fialamboly mivantana, Disney + dia nanambara fa tsy ho afaka handray soa amin'ny ...
Ity charger Mac ity avy amin'ny ElevationLab dia tsara fotsiny.
Ity charger USB Type-C ho an'ny Mac, noforonin'ny orinasa ElevationLab ary nantsoina hoe ElevationHub ity dia milay sy mahasoa fotsiny.
Fantastical 3.1 ho an'ny Mac (ary ny sisa koa) natao hiasa an-trano
Ny kinova vaovao amin'ity alimanaka sy mpitantana ny lahasa ity, Fantastical 3.1 dia manampy fampiasa vaovao hanamorana ny asa any an-trano
Mampahatsiahy anao ny fisokafan'ny WWDC 2020 i Apple ary manemotra ny Apple Design Awards sy ny lab «1v1» mandritra ny herinandro
Mampahatsiahy anao ny fisokafan'ny WWDC 2020 i Apple ary manemotra ny Apple Design Awards sy ny laboratoara "1v1" mandritra ny herinandro. Keynote manokana tsy misy mpihaino. Horaiketina ve izany?
Mac: Vidio foana ny original. Tandremo ity Hackintosh vaovao ity
Hackintosh vaovao no niseho teo amin'ny sehatra. Samy tsy dia atokisana na ny solosaina na ny orinasa nanao azy. Mitandrema amin'ireo fisolokiana mety hitranga ireo
Mety handefa ny AirPods Studio ao amin'ny WWDC ve i Apple?
Azontsika atao ve ny mahita ny AirPods Studio vaovao nambara tao amin'ny WWDC? Solo Beats Pro sy Powerbeats dia amidy eny amin'ny tsena amerikana
Apple dia nanambara ny fandaharam-potoana herinandro WWDC 2020
Apple dia manambara ny fandaharam-potoana amin'ny herinandron'ny WWDC 2020. Herinandro misy fihaonambe sy forum misy programa mihoatra ny 1.000 miaraka amin'ireo injenieran'ny Apple XNUMX.
Fanampiana vaovao ho an'ny "Apple Developers" hitaterana bibikely
Fanampiana vaovao ho an'ny "Apple Developers" hitaterana bibikely. Torolàlana iray hanampiana ireo mpamorona handefa ny tatitra momba ny bibikely.
21 Jona, Andro yoga iraisam-pirenena: fanamby vaovao ho an'ny Apple Watch
Amin'ny 21 Jona hankalazana ny Andro Iraisam-pirenena ho an'ny Yoga, Apple dia handefa fanamby manokana amin'ny Apple Watch. Anjaranao no mahazo izany.
Amin'ity fizarana 39 amin'ny podcast ity dia miresaka momba ny tsaho vao tsy ela akory izay momba ny fahatongavan'ireo chips ARM tao amin'ny MacBooks, ny iMac nohavaozina ary bebe kokoa
Bibikely hafahafa manakana ny mpamorona ivelan'ny Etazonia tsy hanavao ny Apple Developer
Bibikely hafahafa manakana ny mpamorona ivelan'ny Etazonia tsy hanavao ny Apple Developer. Nolavina ny fandoavam-bola amin'ny carte de crédit iraisam-pirenena.
Apple dia nandefa ny "Loharanom-pitantanana tenimiafina" ho an'ny mpamorona
Apple dia nanangana tetikasa rindrambaiko open source vaovao antsoina hoe Password Manager Resources, izay mikendry indrindra ireo mpamorona
Ny fadin-tseranana amerikana dia misambotra ny fandefasana AirPod sandoka
Ny fadin-tseranana amerikana dia misambotra fandefasana AirPod sandoka. Apple dia nijaly tamin'ny olan'ny fisandohana hatrany, hatramin'ny tranga ka hatramin'ny AirPods.
Beta voalohany amin'ny tvOS 13.4.8 ho an'ny mpamorona
Apple dia namoaka ny Beta voalohany an'ny tvOS 13.4.8 tamin'ny alàlan'ny fanatsarana ny fiarovana sy ny fanitsiana Bug
Apple dia manome valisoa ny mpahay siansa informatika amin'ny $ 100.000 noho ny tatitra ny lesoka fiarovana
Apple dia manome valisoa ny mpahay siansa solosaina $ 100.000 noho ny fanaovana tatitra momba ny fiarovana. Bibikely rehefa mampiasa Apple ID amin'ny fampiharana sy tranokala antoko fahatelo.
Apple Watch Series 6 Mety tsy misy micro LED
Ny tsaho vaovao dia manondro fa ny Apple Watch Series 6 manaraka dia azo inoana fa tsy hametraka efijery Micro LED ary hitohy toy ny teo aloha.
Ny zoomom dia tsy tokony hivarotra amin'ny tsiambaratelon'ny mpampiasa
Zoom dia mikasa ny hanavao ny fampiharana azy amin'ny alàlan'ny fampitomboana ny mari-pahaizana encryption fa ho an'ny mpampiasa mandoa ihany. Tsy tokony hamidy miaraka amin'ny filaminana
Efa misy daty ho an'ny andiany Apple TV + "Ted Lasso"
Efa misy daty hanaovana ilay hatsikana vaovao izay hanomboka amin'ny Apple TV + ary hitantara ireo zava-niainana tany Angletera an'i Ted Lasso mpanazatra.
Sensor sensor AirPods Pro, fanokafana fivarotana Apple ary maro hafa. Ny tsara indrindra amin'ny herinandro amin'ny Soy d eMac
Amin'ity herinandro ity izahay dia mitondra vaovao mahaliana vitsivitsy izay hitantsika tao amin'ny Mac amin'ny Mac. Ankehitriny dia azonao atao ny mamaky azy ireo am-pitoniana ary mankafy ny Alahady
Notsipahan'ny mpitsara ny fitoriana an'i Apple TV + noho ny fisandohana ny andiany «Mpanompo»
Notsipahan'ny mpitsara ny fitoriana an'i Apple TV + noho ny fisandohana ny andiany "Mpanompo". Mihevitra ny talen'ny horonantsary italiana fa dika mitovy amin'ny sarimihetsika 2013 nataony izany
ARM MacBooks dia mety ho tonga haingana kokoa noho ny eritreretintsika
Ny zava-drehetra dia manondro ny fahatongavan'ilay processeur ARM vaovao haingana kokoa fa tsy taty aoriana ho an'ny MacBook sasany. Tsy ho an'ny ekipa matanjaka indrindra izany
Miseho eo amin'ny sehatra indray ny Jailbreak ho an'ireo mpampiasa te-hanao izany amin'ny fitaovan'ny iOS sy amin'ny podcastapple miresaka momba azy io, hiaraka aminay ve ianao?
Fivarotana Apple roa ao Japon no hisokatra amin'ity herinandro ity
Fivarotana Apple any Japon hisokatra
Ny mpamorona Apple teo aloha dia mandefa ny mpandahateny 'Cell' hifaninana amin'ny HomePod
Ny mpamorona Apple teo aloha dia mandefa ny mpandahateny "Cell" mba hifaninana amin'ny HomePod. Taorian'ny famolavolana 21 taona tao Apple, Christopher Stringer dia te-hanao mpandahateny manokana.
Apple TV + dia tsy mitombo na dia mandany fotoana betsaka any an-trano aza
Ny areti-mandringana manerantany noforonin'ny coronavirus dia tsy nanampy ny Apple TV + hitombo isa amin'ny isan'ny mpampiasa, fa amin'ny fizarana amin'ny efijery.
Doka iray ho an'ny AirPods no nandresy tamin'ny loka «Art Director's Club»
Doka ho an'ny AirPods no mandresy amin'ny loka "Art Director's Club". Raha manakarama zavaboary tsara indrindra ianao ary tsy manambola amin'ny teti-bola, dia matetika no mitranga izany.
Misintona haingana sy mora ny sary avy amin'ny tranonkala misy an'ity rindranasa ity
Impiry ianao no nanandrana naka sary avy amin'ny pejin-tranonkala iray ary nanamarina ny fomba avy amin'ny pejin-tranonkala ...
Hevitra IMac miaraka amin'ny Face ID sy Magic Trackpad mifanaraka amin'ny Apple Pencil
Asehonay aminao ny hevitry ny mety ho endrik'ilay iMac 2020 vaovao, raha nanana fikasana hanavao ny endrik'ity Mac ity i Apple.
Ny Apple Apple Stores dia nampisondrotra ny tombony 73% amin'ny taona 2019
Ny Apple Apple Stores dia nampitombo ny tombom-barotra 73% tamin'ny taona 2019. Expansión dia namoaka ny tarehimarika ho an'ny magazay Apple Espaniola tamin'ny taona 2019.
Tady vaovao Pride ho an'ny Apple Watch. Anisan'izany i Nike.
Apple dia nametaka fehy vaovao roa ho an'ny Apple Wacth amin'ny lokon'ny avana, amin'ny Andron'ny Pride. Nike voalohany dia manana ny azy.
Apple dia efa mivarotra ny tsipika Eero Mesh WIFI ao amin'ny fivarotana an-tserasera
Apple dia efa mivarotra ny tsipika Eero Mesh WIFI ao amin'ny fivarotana an-tserasera. Routeires iray sy mpamaky teboka fidirana hamoronana tambajotra Wi-Fi an-trano.
Izahay dia mizara ny fizarana vaovao amin'ny podcastapple izay ataonay amin'ny talata alina. Amin'ity herinandro ity vaovao vaovao sy lohahevitra mahaliana, aza hadino izany.
Fehezo ny bateria an'ny fitaovana Bluetooth ao amin'ny Mac
Zahao ny bateria an'ny fitaovana Bluetooth ao amin'ny Mac anao.Raha tsy Apple ny fitaovanao, misy rindranasa roa afaka manampy anao.
Apple dia namoaka horonantsary iray momba ny fiasan'ny "Oak" Felder ao amin'ny MacBook Pro miaraka amin'ny Logic Pro X
Apple dia namoaka horonantsary iray momba ny fomba fiasan'ny "Oak" Felder ao amin'ny MacBook Pro miaraka amin'ny Logic Pro X. Notantarainy tamin'ny antsipirihany ny asany tamin'ny fampiasana ny mety ho tolotra nomen'i Apple
Izahay dia mizara aminareo ny podcast Apple izay niresahanay nandritra ny adiny iray momba ny zava-nisongadin'i Apple tamin'ity herinandro ity
Tapahana ny famokarana AirPods noho ny fihenan'ny varotra
Raha ny angom-baovao dia tsy maintsy mampihena ny famokarany ny AirPods noho ny fidinan'ny varotra manerantany.
Ahoana ny fanafoanana ny kaonty Zoom anao amin'ny Mac
Ahoana no ahafahanao manafoana maharitra ny kaonty Zoom anao amin'ny Mac.
Amidy Porsche 935 amin'ny loko Apple
A Porsche 935 dia amidy amin'ny loko Apple izay nihazakazaka hazakazaka fanatanjahan-tena maro tany amin'ny taona 80 nefa tsy dia nahomby loatra.
"Jamie Visual Visual Gigaton" an'i Pearl Jam ao amin'ny Apple TV + fotsiny
"Jamie Visual Visual Gigaton" an'i Pearl Jam ao amin'ny Apple TV + fotsiny. Ny hevitra voalohany dia ny famoahana ilay horonantsary amin'ny sinema, tsy azo tanterahina ankehitriny.
Mampahatsiahy anao i Apple fa tsy ho ela dia ho Fetin'ny Reny izany
Apple dia efa mampahatsiahy anao fa tsy ho ela dia Fetin'ny Reny ary afaka manana antsipirihany miaraka amin'ny sary pirintin'ny paoma ianao
Apple dia mamoaka ny antontan-taratasy ilaina amin'ny fanamboarana ampinga tarehy
Apple dia mamoaka ny antontan-taratasy ilaina amin'ny fanamboarana ampinga. Izay atrikasa misy milina ilaina dia afaka manamboatra azy ireo.
Amin'ny sary: ​​Mac Pro Wheels: lafo loatra ny rendrarendra
Ny Mac Pro Wheel Kit tahaka ny mbola tsy hitanao. Sarin'ireo kodiarana vy efatra izay toy ny firavaka efatra
CCN-CERT dia mamoaka boky torolàlana momba ny fiarovana amin'ny Apple
Ny Spanish CCN-CERT dia namoaka torolàlana fiarovana lehibe amin'ny fitaovana Apple izay mendrika hamakiana.
Apple dia afaka mandefa ny headphones an-sofiny amin'ity taona ity
Mandeha ny resaka fa raha mbola miala amin'i Apple ny coronavirus dia hampiditra «headphones» vaovao an'ny orinasa amin'ity taona ity. Fanatanjahan-tena amin'ny fomba Retro
Beta faharoa an'ny macOS 10.15.5 miaraka amin'ny vaovao mahaliana
Beta faharoa an'ny macOS 10.15.5 miaraka amina endrika fitantanana bateria vaovao izay mahomby sy mateza kokoa.
Izahay dia mizara aminareo fizarana iray hafa amin'ny podcast Apple izay hiresahanay sy hanaovanay tahaka ny mahazatra, aza hadino izany.
Ny phishing na phishing dia mavitrika kokoa noho ny taloha
Ny fanafihana phishing na ny fangalarana ny mombamomba dia mbola mitohy amin'izao fotoana izao, mitandrema ary jereo tsara alohan'ny hanomezanao data manokana
Afaka mividy takelaka sofina soloina ho an'ny AirPods Pro ianao izao
Namidy an-tserasera i Apple, tamin'ny alàlan'ny tranokalany, ireo kojakoja ho an'ny pad AirPods Pro.
Ny 2020 Powerbeats dia efa nankatoavina amidy
Ny FCC dia efa nanaiky ny famoahana headphones tsy misy tariby izay mety ho Powerbeats 2020 miaraka amina endrika mitovy amin'ny 2019
Beta faharoa amin'ny tvOS 13.4.5 sy watchOS 6.2.5 misy
Ny betas faharoa an'ny Apple TV 23.4.5 sy ny watchOS 6.2.5 dia azo alaina ao amin'ny pejy fampivoarana ofisialy
Kitapo hitsin-dàlana ho an'ny mpizaha Chrome sy Edge amin'ny Mac
Kitendry hitsin-dàlana ho an'ny mpizaha tany Chrome sy Edge amin'ny Mac. Mety ho an'ny mpizaha tranonkala roa ny lisitra satria miorina amin'ny sehatra Chromium iray ihany izy ireo.
Apple dia mampiseho ny haavon'ny fitanana COVID-19 manerantany
Apple dia mampiseho ny haavon'ny confinement ho an'ny COVID-19 manerantany. Azonao atao ny manamarina ny angona isaky ny firenena sy tanàna lehibe manerantany.
Fotoam-potoana ao amin'ny horonan-tsary fampidirana Apple
Ao amin'ny horonantsary fampisehoana Apple dia hitantsika ny safidy handeha amin'ny fotoana marina amin'ny fampisehoana vokatra iray amin'ny fizotry ny fotoana
Tsy misy fampiasa maimaim-poana hisorohana ny fikasihana tsy nahy avy amin'ny Touch Bar
Bar Nothing dia fitaovana ampiasaina maimaim-poana hisorohana ny fikasihana tsy nahy an'ny Touch Bar. Azonao atao ny miasa raha tsy manindry ny bokotra fn ianao.
Tsy mitaky fihainoana an'i Prime intsony ny Amazon Music
Ho afaka maimaimpoana ho an'ny mpampiasa rehetra ny Amazon Music ary tsy homena vola intsony ny Amazon Music Unlimited hifaninana amin'ny Apple Music sy Spotify
Tandremo: Ny AirTag dia tsy ho hita fotsiny ny lakile
Tandremo: ny AirTag dia tsy ho hita fotsiny ny lakile. Raha mahita iray ao am-paosin'ny palitao ianao dia manana olana.
Tezitra amin'i Apple i Tile momba ny fahatongavan'ny AirTag
Tezitra amin'i Apple i Tile momba ny fahatongavan'ny AirTag. Mitaraina momba ny fanovana ao amin'ny iOS 13 izy mba hanakantsakanana ny fampiharana Tile sy ny fahatongavan'ny AirTag.
Podcast 11 × 29: Herinandro fahatelo amin'ny quarantine sy ny vaovao hafa
Dika vaovaon'ny podcast Apple mba hanana fotoana tsara zaraina aminareo rehetra ary miresaka momba an'i Apple sy lohahevitra hafa izahay
Ity no AirPods mainty
Ny AirPods sy AirPods Pro amin'ny mainty toa tsy ao anatin'ny drafitr'i Apple ankehitriny. Toy izao no ho mainty ireto AirPods ireto
Apple TV 64GB, macOS Catalina kinova farany, iFixit MacBook Air sy maro hafa. Ny tsara indrindra amin'ny herinandro dia avy amin'ny Mac aho
Herinandro iray hafa dia mitondra fanangonana kely an'ireo vaovao misongadina ao amin'ny herinandro ao amin'ny Mac avy any Mac aho.
Ny ID ID amin'ny Macs, ny patanty ary ny endrik'ireo sary
Ny ID Face dia mety hahatratra ny Macs ary misy patanty manondro azy, fa ny famolavolana ny sary ao amin'ny patanty dia tsy manazava
Ny sidina fiaramanidina dia mampiseho ny Apple Park nilaozana
Ilay Youtuber Duncan Sinfield fanta-daza, dia naka ny drôna mba hisidinana ambonin'ny Apple Park indray ary amin'ity indray mitoraka ity dia foana tanteraka.
Famolavolana iMac misy fotony miaraka amin'ny bezel kely sy ny base Pro Display XDR
Androany dia tsy sarotra ny manao rendement animated tsara. Mipetraka eo alohan'ny iMac ianao, avelao hanidina ny eritreritrao, ary ...
Mitandrema amin'ny filokana sy vola sandoka noho ny Covid-19
Androany isika dia tokony hampitombo ny fiarovana amin'ny fisolokiana fanomezana ary hitandrina ny phishing izay manandrana mamily antsika hitahiry ny angon-drakitra
Ny safidy tsara indrindra amin'ny keyboard vaovao iPad Pro 2020
Apple dia nanolotra izay mety ho fitendry azo antoka ho an'ny iPad Pro, saingy i Logitech no hanao ny fifaninanana ary ho mafy dia mafy amin'ny azy ireo.
Podcast 11 × 27: Akaiky ny iPhone 9 sy 9 Plus
Izahay dia mizara fizarana vaovao an'ny PodcasApple hahafahanao mandany fotoana mampiala voly miaraka aminay ary avelao izahay hamily ny Coronavirus ...
Ofisialy izao. Sonos S2, dia ho firmware ho an'ny fitaovana vaovao ihany
Nanamafy i Sonos fa hanangana ny firmware vaovao S2 i Sonos amin'ny fahavaratra izay hiaraka amin'ireo fitaovana vaovao ihany
Makà sary WWDC 2020 eto
Eto ianao dia afaka misintona ny sary mihetsika rehetra mifandraika amin'ny Konferansa ho an'ny mpamorona eran'izao tontolo izao Apple
Lisitry ny endrika tsara indrindra 100 an'ny iPhone sy Macintosh
iPhone sy Macintosh ambony ao amin'ny lisitra Top 100 Designs an'ny Fortune. Ny gazety amerikana malaza dia namoaka ny lisitr'ireo endrika tsara indrindra amin'ny vanim-potoana maoderina.
Mety hahemotra ny famotsorana AirPods Pro Lite
Nisy tatitra vaovao nampitandrina fa ny AirPods Pro Lite vaovao dia mety hanemotra ny fanombohana ny tsenany noho ilay malaza sy Coronavirus
Fitsipika vaovao ao amin'ny Apple Store hisorohana ny fihanaky ny coronavirus
Fitsipika vaovao ao amin'ny Apple Store hisorohana ny fielezan'ny coronavirus. Fanovana bateria sy famonoana otrikaina ny iPhone amin'ny vidiny 55 Euros: Izany no nitranga tamiko tamin'ny Alatsinainy
Apple dia manasongadina ny fomba mangarahara ao amin'ny AirPods Pro amin'ny horonan-tsary
Apple dia namoaka horonantsary vaovao tao amin'ny YouTube izay manasongadina ny maody mangarahara sy ny fanafoanana ny tabataba an'ny AirPods Pro
Sonos dia nanitsy ary farany niova ho "tsara ny fomba fanodinana"
Farany Sonos dia nanamboatra ny "mode recycle" an'ny mpandahateny ary tsy hanidy lavitra ilay mpandahateny taloha rehefa mampiasa ity serivisy ity ny mpampiasa
Fanarenana eo amin'ny tsenan-tahiry, première The Banker ary maro hafa. Ny tsara indrindra amin'ny herinandro ao amin'ny SoydeMac
Amin'ity herinandro ity isika dia manana vaovao manan-danja sy tsaho malaza momba an'i Apple sy ny vokatra vokariny. Avelanay eto ny sasany amin'izy ireo
Apple mizara trano voalohany alohan'ny tranofiara maizina ho an'ny Apple TV +
Apple dia namoaka tamin'ny alàlan'ny fantsona YouTube ny tranofiara voalohany an'ny andiany Home Before Dark, ny famokarana azy manokana, izay hanomboka amin'ny 3 aprily
Podcast 11 × 25: Manafoana ny zava-drehetra ny coronavirus
Izahay dia mizara aminareo fizarana vaovao amin'ny Podcast isan-kerinandro. Amin'ity tranga ity, lohahevitra maromaro miavaka ary mazava ho azy, ny coronavirus ...
Ny OPPOWatch vaovao dia raikitra ihany koa amin'ny Apple Watch
Ny famantaranandro natolotry ny OPPO dia dika mitovy amin'ny Apple Watch. Vao haingana ny mpanamboatra no tsy manao ezaka firy amin'ny volavolany
Nofoanan'i Apple ny kaonty orinasa Clearview AI, toy ny tamin'ny Facebook na Google
Apple dia nanala ny kaonty mpamorona orinasa Clearview AI noho ny fanitsakitsahana ny fifanarahan'ilay programa manokana
Tot ho an'ny Mac. Famenon-tsoa tena tsara ho an'ny Apple Notes
Tot dia rindranasa maimaimpoana ho an'ny macOS izay hanampy anao hitazona ny naotinao amin'ny fidirana haingana sy tsotra izay hahagaga anao amin'ny fahatsorany.
Tsingerintaona nahaterahan'i Steve Jobs, mpikirakira azy manokana ho an'ny Mac ary maro hafa. Ny tsara indrindra amin'ny herinandro ao amin'ny SoydeMac
Herinandro iray hafa dia zarainay aminao ireo hevitra misongadina rehetra ao amin'ny Mac avy any Mac.
Ny dokambarotra vaovaon'i Apple Japan "Behind the Mac" dia manangona anime malaza malaza maro
Manangona sarimiaina malaza maromaro ny doka vaovao nataon'i Apple Japan "Behind the Mac". Izy io dia fizarana seho avy amin'ny anime malaza be any Japon.
Steve Jobs dia tokony ho 65 taona androany
Steve Jobs dia tokony ho 65 taona androany. Ny sarin'i Apple dia mifamatotra hatrany amin'i Steve ary ny mifamadika amin'izany. Ireo hevitra roa dia tsy takatra misaraka.
Apple-I, PowerBook 190cs nosoniavin'i Jobs ary maro hafa dia hiakatra lavanty amin'ny volana martsa
Amin'ny volana martsa ho avy izao dia hanao lavanty ny Apple-I ny orinasa RR Auction miaraka amin'ny PowerBook nosoniavin'i Steve Jobs
AirFlay: Ahoana ny fampifangaroana ny AirPods (Pro) amin'ny PlayStation 4.
Ampiasao ny headphone AirPods (Pro) anao toa ny PlayStation 4 noho ny fitaovana AirFly. Vahaolana tsara raha manana headphone Apple ianao
Ho avy tsy ho ela ao amin'ny Apple TV +: Swan Song, miaraka amin'i Mahershala Ali.
Apple sy Anonyme Content dia niara-niasa tamin'ny Mahershala Ali nandresy an'i Oscar hitifitra an'i Swan Song. Ny sarimihetsika vaovao izay havoaka amin'ny lohataona.
Podcast 11 × 23: Virosy amin'ny macOS?
Herinandro iray hafa izahay dia mitondra ny podcastapple hizara aminareo rehetra ny vaovao miavaka mandritra ny herinandro ao amin'ny tontolon'ny Apple sy maro hafa
Raikitra ny ady eo amin'i Apple sy Nuvia
Mihamafy ny raharaham-pitsarana eo amin'i Apple sy Nuvia noho ny filazan'ny orinasa vaovao naorin'ireo mpiasa teo aloha tao amin'ny orinasa California
Apple dia mampiroborobo ny toko mangina amin'ny andiany Little America. Fizarana iray no voatifitra nefa tsy namoaka andalana fifampiresahana iray akory.
Ireo router Routsys dia hahazo fanampiana avy hatrany HomeKit
Linksys dia nanambara ny modely Linksys Velop dia hanampy ny Apple HomeKit mifanentana miaraka amin'ny fanavaozana vaovao
Apple dia mahatratra an'i Microsoft ho orinasa sarobidy indrindra
Apple indray dia nahatratra ny avo indrindra amin'ny sandan'ny anjarany ary lasa ilay orinasa manana ny sandam-bola avo indrindra ambonin'ny Microsoft.
Adobe's Smart Security Kit izao dia mifanaraka amin'ny HomeKit
Adobe dia namoaka fanavaozana ny firmware mba hahafahan'ny Smart Security Kit hifanaraka amin'ny sehatra AppleKit an'ny Apple ankehitriny.
Kiraro kiraro iray avy amin'ny taona 90 miaraka amin'ny logo Apple ho an'ny lavanty
Amin'ny faran'ny volana martsa, mpivarotra kiraro kiraro misy ny logo Apple vita pirinty amin'izy ireo an'ny mpiasan'ny orinasa iray dia hiakatra lavanty.
Kilema fiarovana amin'ny fitaovana Philips Hue mamela ny fibaikoana tsy misy alalana aminay
Hitan'izy ireo fa marefo ny jiro ao amin'ny takamoa Philips Hue izay mamela ny fampiasana azy ireo raha tsy afaka misoroka azy ny tompony.
Podcast 11 x 21: Tsaho ary tsaho maro hafa
Herinandro iray hafa dia entinay ho anao rehetra ny Apple Podcast miaraka amin'ny vaovao, tsaho ary fampahalalana hafa mifandraika amin'ny Apple sy ny vokariny
Apple dia manolo ny kapila sofina AirPods Pro maimaim-poana
Araka ny filazan'ny mpampiasa sasany ary noho ny Apple Care, ny orinasa amerikanina dia manolo ny pad silika an'ny AirPods Pro maimaim-poana
Ny jamba IKEA Fyrtur sy Kadrilj dia mifanaraka amin'ny HomeKit ankehitriny
Ny kinova farany indrindra ho an'ny foiben'ny IKEA (catwalk) dia misy ankehitriny izay ahitan'ny Fyrtur sy Kadrilj smart blinds ho lasa HomeKit mifanaraka
Avast Antivirus dia mivarotra ny angon-kevitr'ireo mpampiasa azy amin'i Google sy Microsoft
Avast Antivirus dia mivarotra ny angon-kevitr'ireo mpampiasa azy amin'i Google sy Microsoft. Fikarohana, geolocation, LinkedIn, YouTube na fitsidihana tranokala vetaveta. Amidy daholo.
Podcast 11 × 19: Series, TouchID ary tsiambaratelo
Amin'ity herinandro ity dia manana fizarana vaovao amin'ny podcast izahay ary miresaka momba ny andian-tantara Apple, fiainana manokana ary lohahevitra hafa mifandraika amin'ny orinasa Cupertino
Miala tsiny Apple: Disney + dia manantena ny premiereany any Eropa
Miala tsiny Apple: Disney + dia manantena ny premiereany any Eropa. Amin'ny 24 martsa, manomboka ny diany ilay sehatra vaovao Micky Mouse streaming.
Tsy mijanona ny phishing, aza milatsaka amin'izany
Mihamafy ny "phishing" na fanafihana halatra maha-izy anao amin'ny voalohan'ny taona, aza misalasala ary aza mino ireo mailaka ireo
"Asphalt 9: Legends" dia misy manapotsitra ny Mac Catalyst
Ny "Asphalt 9: Legends" dia azo ampiasaina manapotsitra ny Mac Catalyst.
Fitbit dia manampy ny fatra fandrefesana oxygen oxygen
Ny orinasa Fitbit dia nanampy fotsiny ny asan'ny famakiana saturation ny ra amin'ny alàlan'ny fanavaozana ny lozisialy
Ny processeur A14 vaovao dia azo oharina amin'ny fahombiazan'ny MacBook Pro sasany
Fa maninona no sarobidy ankehitriny ny anjaran'i Apple?
Misy antony iray manazava ny antony fampiakarana ny sandan'ny Apple share sy ny antony inoana fa hitohy ela kokoa io.
11 × 18 Podcast: Angano ara-tsiansa CES
Ao amin'ny podcast farany an'ny Soy de Mac sy Actualidad iPone dia miresaka momba ny vaovao mifandraika amin'i Apple isika, izay natolotra tamin'ny CES 2020 lasa teo
Logitech MX Keys ary MX Master 3, manakaiky ny fahalavorariana
Logitech MX Keys sy MX Master 3 dia mamorona fonosana "keyboard + mouse" izay manambatra ny fahombiazana, ny fiononana ary ny kalitaon'ny fitaovana tsy misy toa izany.
Ianao ve mila Apple I? Manamboara modely ho anao
Raha mila dika mitovy amin'ny Apple I amin'ny vidiny ambany lavitra noho izay azonao any an-tsena ianao, aza hadino ity tetikasa ity hananganana anao.
LineDock dia mampitombo ny fahafaha-manao sy ny herin'ny MacBook
LineDock dia namoaka fototra ho an'ny MacBook 15 sy 16-inch ao amin'ny CES izay hamadika ireo solosaina ireo ho lasa milina faran'izay mahery.
David contre Goliath na izay mitovy: Sonos contre Google
Sonos ny orinasan'ny mpandahateny mifanentana amin'ny AirPlay 2 ary misy mpandahateny sasany miaraka amin'ny IKEA dia mitory ny Google noho ny fandikana patanty
Podcast 11 × 17: Inona no ho entin'ny 2020 amintsika?
Eto izahay dia mamela fizarana vaovao an'ny #PodcastApple izay hiresahantsika lohahevitra maro mifandraika amin'ny Apple, CES sy maro hafa
Tranofiara voalohany amin'ny andiany ho an'ny Apple TV +: "Mythic Quest: Raven's Banquet"
Apple namoaka ny tranofiara ofisialy voalohany ho an'ny andian-tantara mahatsikaiky Mythic Quest: Raven's Banquet, izay hanomboka amin'ny 7 febroary
Apple dia te-hanao sarotra kokoa ho an'ny mpisoloky
Apple dia te-hampihatra fepetra vaovao hisorohana ireo mpisoloky izay tsy maintsy misy ifandraisany amin'ireo laharana andian'ireo fitaovana.
Ny zavatra akaiky indrindra ny AirPower (tsy nahomby) dia avy amin'ny tanan'ny ZENS
Ny orinasa Holandey ZENS dia nanangana fitaovana eny an-tsena izay mety ho AirPower ara-dalàna izay tsy azon'i Apple entina eny an-tsena
Nanomboka nanohana ny HomeKit tamin'ny takelaka Tradfri i Ikea
Ikea dia efa mandefa ny fanavaozana nampanantenaina izay hampifanaraka ny Tradfri blinds amin'ny rafitra Apple Home
LG dia manambara karazana fahitalavitra 8k vaovao mifanaraka amin'ny AirPlay 2 sy HomeKit
Andro vitsivitsy talohan'ny fanombohan'ny CES 2020 any Las Vegas, LG dia nanolotra fahitalavitra 8k vaovao mifanaraka amin'ny AirPlay 2 sy HomeKit
Ny hetsika Apple malaza indrindra tamin'ny folo taona. 2010 hatramin'ny 2019
Izahay dia mijery ny zava-nitranga manan-danja indrindra an'ny Apple tao anatin'ity folo taona lasa izay navelanay ity. Ho hitantsika eo raha afaka mifanandrify amin'ilay napetraka eo amin'ny bara izy
Mikasa ny handao an'i Apple i Tim Cook hanatevin-daharana an'i Jonathan Ive
Nisokatra tamin'ny antoko Noiche Buena an'ny orinasa i Tim Cook ary nilaza fa te handao an'i Apple izy amin'ny tapaky ny volana febroary 2020
Mieritreritra ny hividy AirPods faharoa?
Raha nieritreritra ny hividy AirPods faharoa na AirPods Pro ianao dia tsy tokony halahelo an'ity Kitapo fanadiovana ity izay hamela azy ireo ho vaovao
Krismasy sambatra sy tratry ny taona 2020!
Mirary antsika rehetra hankafy ity Krismasy ity ary mirary taona vaovao sambatra
Mythic Quest dia hanana fizarana faharoa amin'ny Apple TV +
Raha tsy miandry ny premiere amin'ny vanim-potoana voalohany amin'ny Mythic Quest, Apple dia nanapa-kevitra fa mety ny firaketana ny vanim-potoana faharoa
Ny AirPods Pro dia manana latency tsara kokoa noho ireo teo alohany
Mitohy miresaka ny AirPods Pro. Amin'izao fotoana izao dia izy ireo no headphones tsy misy tariby tsara indrindra ananan'i Apple, eny fa na dia eo amin'ny fetran'ny blu-blueberry aza
Ahoana ny fametrahana ny sary famantarana paoma amin'ny hitsin-dàlana amin'ny Mac
Ampianarinay anao ny fametrahana ny sary famantarana Apple amin'ny toerana rehetra amin'ny alàlan'ny hitsin-dàlana fitendry Mac
Mahazoa fampandrenesana bateria ambany amin'ny Mac anao, avy amin'ny fitaovana Apple hafa
Miaraka amin'ity programa tsotra ampiasaina sy mora ity dia afaka mandray fampandrenesana bateria ambany amin'ny Mac antsika isika, avy amin'ny fitaovana Apple mifandray rehetra
Karakarao ny AirPods Pro miaraka amin'ity tranga ity avy amin'ny Catalyst
Catalyst dia efa manana ny cas de protection avo azony ho an'ny AirPods Pro amin'ny maodely roa. Amin'ny vidiny farany € 39,99
11 × 15 Podcast: Aiza ny Apple Event?
Amin'ity herinandro ity isika dia mandroso ny podcast hiresaka momba ny hetsika Apple any New York fa tena kely na tsy misy fantatra hatramin'ny faran'ny io
Raiso ny sary mivoaka amin'ilay MacBook Pro 16 ”vaovao
Ireo sary vaovao nofidina manokana ho an'ny MacBook Pro 16-inch dia vonona izao halefa.
Lahatsary voalohany momba ny Cult of Mac fanontana faharoa
Ireo horonan-tsary voalohany amin'ny fomba hanatanterahana ny fanontana faharoa amin'ny boky sy ho an'ny mpankafy Apple manomboka miseho. Kolontsain'ny Mac
Hetsika fampiharana ao New York, sensor sensor ao amin'ny MacBook Pro, sy maro hafa. Ny tsara indrindra amin'ny herinandro dia avy amin'ny Mac aho
Amin'ity herinandro ity isika dia manana vaovao manan-danja marobe toa ny hetsika any New York na ny sensor vaovao ho an'ny efijery 16 "MacBook Pro.
Cult of Mac fanontana faharoa dia ho hita amin'ny Desambra
Ny fanontana faharoa an'ny Cult of Mac, dia ho hita manomboka amin'ny 17 Desambra. Ilay boky izay manangona ny zava-nitranga nanomboka tamin'ny 2006 ka hatramin'izao tao amin'ny Apple
Vazivazy mahatsikaiky miaraka amin'ny sticker amin'ny AirPods eny ambonin'ny tany
Vazivazy mahatsikaiky ity izay nametrahan'i Pablo Rochat andian-taratasy fametaka amin'ny gorodona miaraka amina endrika mitovy amin'ny an'ny AirPod
Eto ny faran'ny kitendry lolo ao amin'ny MacBooks
Apple dia nanoratra ny amin'ny famafana ny klavier miaraka amin'ny mekanisma lolo ao amin'ny MacBook ary porofon'izany ny fahatongavan'ilay 16 "MacBook Pro
Ny fivoriana an-gazety Apple dia mety ho lakilen'ny 16 to MacBook Pro
Hita fa i Apple dia mitarika andianà fampahalalam-baovao tsy miankina iray izay mety hampisehoana ilay MacBook Pro 16 "vaovao.
Fomba fiheverana ny tokony ho macOS 11 Ventura
Ny horonantsary iray ao amin'ny YouTube dia ahafahantsika mahita foto-kevitra vaovao momba ny mety ho macOS Ventura vaovao. Amin'izao fotoana izao dia te hahafanta-javatra fa manana hevitra tsara.
OWC dia mandefa ny Dock Pro miaraka amin'ny Thunderbolt 3 mikendry ireo matihanina
OWC dia mandefa ny Dock Pro miaraka amin'ny Thunderbolt 3 mikendry ireo matihanina, miaraka amin'ny seranan-tsambo 2 Thunderbolt 3, seranan-tsambo eSATA ary fifandraisana Ethernet
Fihenam-bidy hatramin'ny 30% amin'ny fanavaozana ny Sonos anao
Sonos dia manampy programa fanodinana fitaovana ahafahan'ny mpampiasa mahazo hatramin'ny 30% amin'ny vidin'ny mpandahateny vaovao.
Herinandro AirPods, tsaho MacBook Pro, Catalina ary maro hafa. Ny tsara indrindra amin'ny herinandro ao amin'ny SoydeMac
Famintinana isan-kerinandro miaraka amin'ny vaovao manandanja indrindra ato amin'ny Mac. Avy amin'ny herinandro vaovao momba ny rindrambaiko sy ny vaovao momba ny fitaovana.
Apple Pay dia nanao transakta 4 heny mihoatra ny PayPal tamin'ny telovolana lasa teo
Ny teknolojia fandoavam-bola tsy misy tariby an'ny Apple, Apple Pay, dia nihoatra ny fifanakalozana PayPal tamin'ny telovolana lasa teo.
Izahay dia mizara ny fizarana vaovao amin'ny podcast Apple izay ataonay isan-kerinandro ary miresaka momba ny vaovao sy vaovao Apple
Malahelo an'i iTunes na Aperture ao amin'ny macOS Catalina ve ianao? Mamerina azy ireo indray ny retroactive
Raha nametraka macOS Catalina ianao ary Malahelo ny iTunes, Capture na iPhoto mahazatra ianao dia tokony hanandrana maimaimpoana ny fampiharana Retroactive.
Raha manana 1,5 tapitrisa euro ianao dia afaka mahazo an'ity Apple-1 ity
Raha manana vola be ianao, dia mety afaka mahazo menaka Apple-1 eo akaikin'ny mint sy ny kojakojany hanaovana lavanty amin'ny eBay.
Azo antoka fa tsy manana teny ifotony isika amin'ity volana ity
Miharihary kokoa fa amin'ity volana ity isika dia tsy hanana keynote ofisialy Apple hanolotra ny vokariny ary faran'ny herinandro latsaka ny volana oktobra
Samy mandray an'i Apple TV + sy Disney + i Netflix
Netflix dia nilaza fa tsy manahy momba ny fahatongavan'i Disney + sy Apple + izy ireo, raha ny marina dia mandray azy ireo ary milaza fa avelany hitombo bebe kokoa izany.
Izahay dia efa manana fizarana vaovao isan-kerinandro amin'ny podcast izay hiresahanay momba an'i Shina sy Apple, fanavaozana, tsaho ary vaovao hafa
Ikea KADRILJ sy FYRTUR manao jamba maranitra amin'ny antsipiriany
Ikea dia efa manana ireo jamba mitondra motera vaovao hita any amin'ny magazay sy amin'ny Internet. Ireo dia jamba mandeha amin'ny motera malina
Dune Pro, ny tranga PC izay mandika ara-bakiteny ny Mac Pro
Rehefa tsy afaka mividy Mac Pro ianao ary te hanana ny endriny hananganana PC anao manokana na koa "Hackintosh" iray aza. Dune Pro boaty dia safidy
Google Pixelbook Go te-hijoro amin'ny MacBook an'ny Apple
Tao amin'ny Google dia natolotr'izy ireo omaly tolak'andro ny vokatra vitsivitsy ary eo amin'izy ireo ilay Google Laptop Pixelbook Go vaovao
Izahay dia efa manana fizarana vaovao #podcastapple misy ho anao rehetra. Omaly dia nanao fampisehoana mivantana tamin'ny andiany iraika ambin'ny folo tamin'ny vanim-potoana fahenina isika
Apple manavao ny Apple Watch Series 5.3.2 sy ny Series 1 amin'ny watchOS 2
Apple manavao ny Apple Watch Series 5.3.2 sy Series ho an'ny watchOS 1. Ny fanavaozana ireo fitaovana ireo ho an'ny watchOS 6 dia ho an'ny watchOS 6.1
Avid sy Premiere dia hanaiky ny endrika RR an'ny ProRes an'ny Apple
Avid sy Premiere dia hanaiky ny endrika RR an'ny ProRes an'ny Apple. Apple amin'ny lafiny iray dia hanaiky ny endrika Avid sy Premiere miaraka amin'ireo fanavaozana
Amin'ity fizarana vaovao amin'ny podcast ity dia miresaka momba ny vaovaon'ny iPhone 11 sy ny fakantsary mahatalanjona izy. Raha te handany fotoana kely miaraka aminay ianao dia kitiho ny "play"
Ny sarimihetsika "The Mosquito Coast" dia lasa andian-tantara ho an'ny Apple TV +
Ny Mosquito Coast dia iray amin'ireo andiany manaraka azo avy amin'ny serivisy video streaming Apple TV +
Hevitra voalohany an'ny Apple Arcade. Nanandrana izany ny haino aman-jery sasany
Hevitra voalohany an'ny Apple Arcade. Ny toeram-pivarotana sasany dia nisedra azy ary mahatalanjona ny naoty ankapobeny amin'ny sehatry ny lalao.
Apple Watch Series 5 milanja hatramin'ny 13% ambany noho ny maodely vy
Apple Watch Series 5 milanja hatramin'ny 13% ambany noho ny maodely vy tsy misy fangarony. Ny Series 5 dia tsy mampiseho fanovana lehibe raha oharina amin'ny Series 4
Daty famoahana macOS Catalina, watchOS 6, tvOS 13, iOS 13 ary iPadOS 13
Atoro anao ny daty famoahana ofisialy ny kinova manaraka amin'ny iOS 13, watchOS 6, macOS, tvOS 13 ary iPadOS
Apple Arcade dia mivoaka amin'ny 19 septambra amin'ny vidiny $ 4,99 isam-bolana
Apple Arcade dia mivoaka amin'ny 19 septambra amin'ny vidiny $ 4,99 isam-bolana ary azo andramana mandritra ny iray volana.
Araho miaraka aminay ny keynote an'i Apple
Amin'ity talata ity dia manana teny ifotony isika ary samy maniry hahita ny vaovao amin'ny Apple iPhones, manaraka ny hetsika mivantana miaraka aminay
Satechi USB-C Clamp HUB Pro ho an'ny iMac Review
Notsapainay ny Satechi HUB izay ahafahanao manana seranan-tsambo enina eo anoloana ny iMac anao amin'ny alàlan'ny USB-C tokana miaraka amina endrika Apple.
Ny fanitarana Safari ivelany amin'ny Mac App Store dia hijanona tsy hiasa amin'ny macOS Catalina
Ny fanitarana Safari ivelany amin'ny Mac App Store dia hijanona tsy hiasa amin'ny macOS Catalina. Tomban-kevitr'ireo mpamorona raha hafindra any amin'ny fivarotana Mac na tsia
«Eto ny Apple Card» fanambarana vaovao momba ny Apple card
Fanambarana vaovao navoakan'i Apple tao amin'ny fantsona YouTube. Amin'ity tranga ity, ny carte de crédit Apple no protagonist an'io.
Acronis True Image 2020 dia ho an'ny backup cloud
Acronis True Image 2020 dia eto raha hamaha ny rahona ary hanao fananganana mandroso kokoa noho ny Time Machine
Mianara Final Cut Pro X miaraka amin'ny YouTuber iJustine
Mianara Final Cut Pro X miaraka amin'ny YouTuber iJustine, ny dingana tsirairay amin'ny alàlan'ny alàlan'ny fampiharana, amin'ny fotoana mitovy anaovanao ny tetikasa
Logitech dia mandefa ny MK470 Slim Combo, kitendry sy totozy matevina ary manify
Logitech dia manolotra keyboard sy totozy vaovao miaraka amin'ny fomba minimalista. Ny Combo Combo Slim MK470
Apple manavao ny dockany mba hifanaraka amin'ny 4K sy HDR
Apple manavao ny dockany hanohanana ny 4K sy HDR amin'ny seranan-tsambo HDMI. Ity fitaovana ity dia mifanaraka amin'ny iPad Pro
Ireo no mety asongadin'ny MacBook Pro 16-inch
Ireo no mety asongadin'n